FITORIANA NY BEN’NY TANANAN’ALASORA : Indroa niala maina ireo mpitory · déliremadagascar
STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina
NECROLOGIE : Nour’aly un zanatany actif est parti
JOURNEE MONDIALE DU LIVRE ET DROIT D’AUTEUR : Les Happy Women ont organisé une sensibilisation sur le digital
FANDAHARAN’ASA MADIO TOM: EPP 05 eto Antananarivo renivohitra nahazo toeram-pidiovana manaram-penitra
HERIN’ARATRA TAPATAPAKA : MISY VAHAOLANA AO AMIN ‘ NY BAOLAI
NECROLOGIE : Décès du Père Bethaz (sj)
FITORIANA NY BEN’NY TANANAN’ALASORA : Indroa niala maina ireo mpitory
politique	 5 novembre 2020 R Nirina
Nohamafisin’ny teo anivon’ny fitsarana tampony ny didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana . Tsy afa-po tamin’ny didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny kandidà mpanolon-tsaina iray avy ao amin’ny fikambanana TAMI ( TAlasora MIray) sy ny kandidà ben’ny tanana laharana fahatelo ka nampiakatra teny amin’ny fitsarana tampony. Anton’ izao fitoriana izao ny fanafoanana ny didy nahalany ny ben’ny tananan’Alasora, Jimmy Randriantsoa. Nivoaka ny 04 Novambra 2020 ny valin’ny fitsarana teny amin’ny fitsarana tampony izay nanambara fa tsy mari-pototra ny fitoriana nataon’ny kandidà mpanolon-tsaina sy kandidà ben’ny tanana io. « Mitohy ny asa fampandroasoana ny kaominina Alasora ary miroso tsikelikely izany. Tanjona sy vaindoandraharahako ny mba ho Alasora iombonana ka mahate-honina », hoy Jimmy Randriantsoa, ben’ny tananan’Alasora.
Marihana fa ny volana Desambra 2019 no nitory teny amin’ny fitsarana miady amin’ny fanjakana ny ity kandidà mpanolotsaina sy kandidà ben’ny tanana ity. Nivoaka ny didy tamin’ny 08 Janoary 2020 ka lany ho ben’ny tananan’Alasora i Jimmy Randriantsoa izay kandidàn’ny antoko TIM. Ny 20 Janoary 2020 dia nametraka fitoriana teny amin’ny fitsarana tampony indray izy ireo. Noho ny fisian’ny aretina coronavirus teto amintsika dia ny izao vao notanterahana ny fitsarana ka. Ny didy nivoaka dia azo adika sy manamafy amin’ny maha ben’ny tanana an’i Jimmy Randriantsoa.
STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 1...
NECROLOGIE : Nour’aly un zanatany acti...
JOURNEE MONDIALE DU LIVRE ET DROIT D&rsq...
FANDAHARAN’ASA MADIO TOM: EPP 05 e...
HERIN’ARATRA TAPATAPAKA : MISY VAHAOLA...
NECROLOGIE : Décès du Père Bethaz (sj...
Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala�...
Vavaka Tompo ô ! Sitranonao ny Mala...
AKANY IARIVO MIVOY : Somapro contribue �...
STARTIMES : GasyStar, chaîne malagasy 100% manome lanja ny fanatanjahantena sy kolontsaina 30 avril 2021
NECROLOGIE : Nour’aly un zanatany actif est parti 26 avril 2021
JOURNEE MONDIALE DU LIVRE ET DROIT D’AUTEUR : Les Happy Women ont organisé une sensibilisation sur le digital 25 avril 2021
FANDAHARAN’ASA MADIO TOM: EPP 05 eto Antananarivo renivohitra nahazo toeram-pidiovana manaram-penitra 23 avril 2021
HERIN’ARATRA TAPATAPAKA : MISY VAHAOLANA AO AMIN ‘ NY BAOLAI 23 avril 2021
NECROLOGIE : Décès du Père Bethaz (sj) 22 avril 2021
Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy 21 avril 2021